Tafakatra 71 ny isan’ny maty tamin’ny Alahady nandritra ny famoretana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganam-panjakana tany Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Tafakatra 71 ny isan'ny maty tamin'ny Alahady nandritra ny famoretana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganam-panjakana tany Myanmar
Andro nahalatsahan-drà be indrindra hatramin'ny 1 Febroary nisian'ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila
Voadika ny 18 Marsa 2021 5:09 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, ਪੰਜਾਬੀ, Español, Ελληνικά, English
Ireo mpiasa mpamonjy voina nitondra sivily noratrain'ny mpitandro ny filaminana nitifitra ireo mpanohitra ny fitondrana tany Mandalay ny Alahady teo. Sary sy fanazavana avy amin'ny The Irrawaddy
Navoaka voalohany tao amin'ny The Irrawaddy, tranokalam-baovao tsy miankina iray any Myanmar ity lahatsoratra ity, ary nasiam-panovana sy navoaka indray eto amin'ny Global Voices ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
VAOVAO FARANY: niampy roa amby telopolo ny olona maty araka ny tatitra tamin'ny alahady, ka nahatonga ny fitambarany ho 71, ary nahatonga izany ho ilay andro nahalatsahan-drà be indrindra hatramin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 1 Febroary, rehefa nanamafy ny famoretany ireo mpanao fihetsiketsehana ny fitondrana Myanmar. Nahatratra 167 ny isan'ny maty ny alatsinainy tolakandro (15 Martsa).
Andro iray hafa nahitana ny maty betsaka indrindra tamin'ny fihetsiketsehana ny alahady tany Myanmar satria mpanao mpihetsiketsika mpanohitra ny fitondrana miisa 39 no novonoin'ny mpitandro ny filaminana nanerana ny firenena, ka nahatonga ny isan'ny maty hatramin'ny nanombohan'ny fanonganam-panjakana tamin'ny volana lasa ho 134.
Ny 3 Martsa no andro nadatsahan-drà be indrindra niainan'ny firenena Azia atsimo atsinanana, raha olona 28 no novonoin'ny miaramila sy ny polisy nanerana ny firenena nandritra ny fihetsiketsehana an-dalambe manohitra ny fitondrana miaramila.
Nampiasa bala tena izy, baomba mandatsa-dranomaso ary grenady ny mpitandro ny filaminana nanafihana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fitondrana nandritra ny andiam-pamoretana izay nahafatesan'olona tamin'ny Alahady teo noho ny fihetsiketsehana sit-in tao amin'ny faritra Hlaing Thar Yar, andrefan'i Yangon. Nanomboka tamin'ny 9 ora sy sasany maraina ka hatramin'ny mody masoandro no nitifitra ny mpitandro ny filaminana.
18 no maty voatifitra ary maro hafa no naratra ny harivan'ny Alahady araka ny pejy Facebook-n'ny dokotera iray izay nikarakara ireo naratra tao amin'ny hopitalin'ny tao an-tanàna. Nilaza izy fa miady amin'ny fahafatesana ny iray amin'ireo mpanao fihetsiketsehana roa izay voatifitra teo amin'ny lohany. Heverina fa mbola hiakatra avo kokoa ny isan'ireo maty satria betsaka ny naratra mafy nandritra ny fitifirana nataon'ny polisy.
Tany amin'ny tanànan'i Dagon Atsimo any atsinanan'i Yangon, sivily telo, isan'izany ny zazavavy 15 taona, no maty rehefa voatifitra teo amin'ny lohany sy ny kibony. Raha ny filazan'ny iray tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana, nanomboka nitifitra ireo mpanao fihetsiketsehana ny polisy sy ny miaramila tamin'ny 6 ora hariva ary nitohy hatramin'ny 11:00 alina izany. Nilaza ilay mpanao fihetsiketsehana fa olona miisa 15 no naratra mafy. Manodidina ny 50 noho izany ny totalin'ny olona naratra tany Dagon Atsimo.
Sakana napetraky ny mponina teo amin'ny sampanan-dalana Bayintnaung tao Mayangone, Yangon ny alatsinainy maraina. Natao ny sakana mba hanakanana ny polisy sy ny miaramila tsy handefa miaramila any Hlaing Thar Yar, izay farafahakeliny efa 30 ireo mpanao fihetsiketsehana mpanohitra ny fanonganam-panjakana no maty ny Alahady teo.
Nampiasa hery famoretana tamin'ny fihetsiketsehana manohitra ny fitondrana nataon'ny mpianatra tany Bago ihany koa ny mpitandro ny filaminana ny Alahady maraina. Nandritra ny famoretana, tovolahy iray no maty voatifitra, raha olona telo hafa kosa naratra. Ny alahady tolakandro, nisy vehivavy iray maty voatifitry ny mpitandro ny filaminana, ary navela tao anaty tatatra ny fatiny taorian'ny namonoana azy.
Tao Hpakan, foibem-pitrandrahana vatosoa ao amin'ny Fanjakana Kachin, lehilahy iray 30 taona no maty voatifitra ary enina hafa no naratra rehefa notifirina bala tena izy ireo mpanao fihetsiketsehana ny Alahady maraina.
Vehivavy iray no maty voatifitra ary olona enina hafa kosa naratra tao amin'ny tanàn-dehibe faharoa lehibe indrindra ao Myanmar, Mandalay, tamin'ny fihetsika mitovy nataon'ny polisy sy ny miaramila ny Alahady tolakandro.
Nahitana ny famoretana henjana indrindra tao Yangon tamin'ny alahady. Ankoatra ireo olona miisa 18 novonoina tao Hlaing Tha Yar, mpanao fihetsiketsehana miisa 17 hafa no voalaza fa novonoina nandritra ny fanafihan'ny polisy an'ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny faritr'i Yangon toa an'i Shwepyithar, Oakkalapa Avaratra, Dagon Atsimo, Insein, Hlaing, Thingyangyun ary Dagon Avaratra.
Hoy ny mpanao fihetsiketsehana iray tao amin'ny Kaominina Hlaingtharyar ao Yangon izay nahitana fahafatesana mpanao fihetsiketsehana marobe, tamin'ny The Irrawaddy:
Tsy azo ekena mihitsy ireo fitifirana ireo. Tsy manaparitaka ny fihetsiketsehana izy ireo fa mamono ny vahoaka amin'ny herisetra fotsiny.
Tao amin'ny tanànan'i Tamwe tao Yangon, mpianatra mpitsabo iray no voatifitry ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny paositry ny polisy. Nampiseho ireo polisy nisaritsarika ilay tovolahy naratra sy nihosin-dra sady nandaka sy nidaroka vehivavy iray saika hamonjy ilay mpianatra ny lahatsary nalaina. Nentin'ny polisy ity farany. Ny Alahady hariva, mbola miady amin'ny fahafatesana ilay mpianatra, raha ny filazan'ny namana akaiky azy hatrany.
Nipoaka manerana an'i Myanmar ny hetsi-panoherana ny fitondrana nandritra ny iray volana mahery taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 1 Febroary. Nanomboka ny tapaky ny volana Febroary dia nanamafy hery famoretana mihosin-drà natao tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana manerana ny firenena ny fitondrana miaramila, raha sady nilaza fa “ny fampiasan-kery kely indrindra” no nampiharina mba hamehezana vahoaka.
Oseania 6 andro izay